Homeတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး46 Kahramanmarasဆောင်းရာသီနှင်းလျှောစီး Yedikuyu အဘို့ပြင်ဆင်
22 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 46 Kahramanmaras, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, အထွေထွေ, တူရကီ, TELPHER 0
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Hayrettin Güngör, Yedikuyular Bertiz ရပ်ကွက်အတွင်းနေဖြင့်ခွင့်ပြု access ကိုသွေးလွှတ်ကြောများနှင့်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Kahramanmaras မြို့တော်ဝန် Hayrettin Güngör, Bertiz ရပ်ကွက်အတွင်းနှင့်ကတ္တရာအလုပ်ကျော်ကြည့်ရှုအားပေးသည့်နှင်းလျှောစီးဖို့ access ကိုပေး Yedikuyu ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသွေးလွှတ်ကြော။ အတူတူဒေသတွင်း၌၎င်းတို့၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆန်းစစ်မန်နေဂျာ၏မြို့တော်မြူနီစီပယ်နှင့်ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကသမ္မတGüngör, အဖွဲ့လွယ်ကူခြင်းစေလိုကြောင်း။
မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Hayrettin Güngörထို့နောက် Yedikuyu နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေလွန်။ အတွင်းမြို့အပြင်ဘက်နှင့်ဆောင်းတွင်းရာသီအတွက်စက်ရုံဧရိယာအများအပြားဧည့်သည်များအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်ဆန်းစစ်ရန်သူ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမြင်များကိုသမ္မတGüngörကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းအတွက်ဆက်စပ်ကြေညာချက် "Bertiz Yedikuyu တှငျတှေ့နှင့်နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသွေးကြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတ္တရာအလုပ်ကိုဆက်လက်။ တစ်တိုတောင်းသောအချိန်၌ဘုရားသခင်ဆန္ဒရှိပြီးစီးခဲ့ပါလိမ့်မည် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Yedikuyu နှင်းလျှောရာသီပြင်ဆင် 20 / 09 / 2017 Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Yedikuyu ကုလားထိုင်-LIFT နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာအဆောက်အဦ, ကဲ့သို့သောလမ်းကြောင်းတည်းဖြတ်ရေးစစ်ဆင်ရေး၏ပြီးစီးသည့်စက်မှုစနစ်၏ရွက်တိုင်ကိုစိုက်နှင့်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲစနစ်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆက်လက်ပြီးနောက်ကြိုးမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ။ အဆိုပါလေယာဉ်ပြေးလမ်း၏တစ်ခုလုံးကိုလမ်းကြောင်း, ကိုလက်စသတ်ခံရဖို့အခြေခံအဆောက်အအုံပြီးစီးခဲ့ပြီ။ အုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အဦများနှင့်အမြင့်အတွက် 1844 2055, ထိုကဲ့သို့သောကော်ဖီဆိုင်အဖြစ်လူမှုရေးအဆောက်အဦးများဆက်လက်။ ယင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကဒီမှာပြုကတည်းကပုဒ်ရဲ့31840 အပိုင်းပိုင်း Yedikuyular မီတာမြင့်သောနှင်းလျှောစီး Center ကလာအတူတကွအခြေစိုက်စခန်းဘူတာရုံနှင့်အတူ, အရှည်အတွက်နှင်းလျှောစီးဓာတ်လှေကားလိုင်းတိုင်လိုင်း 8 10 ပိုစတာ 760 မီတာတစ်ဦးနှင်းလျှောစီးဓာတ်လှေကားဖြစ်လိမ့်မည်။ သုံးပြေးလမ်းရှိလိမ့်မည်။ အရင်ကဆိုရင်များအတွက် 8 ရာခိုင်နှုန်းကဆင်ခြေလျှောနှင့်အတူ Teleski လမ်းကြောင်း ...
Yedikuyu နှင်းလျှောရာသီပြင်ဆင် 24 / 10 / 2017 Kahramanmaras ၏မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးစတင်ကြောင်း Yedikuyu နှင်းလျှောစီး Center ကအပြည့်အဝမြန်နှုန်းနှင့်အတူဆက်လက်လေ့လာတယျ။ လေ့လာရေး Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လေ့လာရေးနှင့်စီမံကိန်းများဌာနနှင့်စီမံကိန်းများညွှန်ကြားမှုထိန်းချုပ်မှုနှင်းလျှောစီး 1800-xnumx'l အတွက် Yedikuyu ၏ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးသောကုန်းပြင်မြင့်ဖိုက်ဘာအင်တာနက်နှင့်အလတ်စားဗို့အားလျှပ်စစ် Transformer ပြီးစီးခဲ့ပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အလယ်ဗဟို 2000 မြင့်အတွက်အဆောက်အဦးများ, စားသောက်ဆိုင်များ, အဆောက်အဦးများ vs snowtruck (ဆီးနှင်းကြိတ်ခွဲစက်) အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု, 1844 မြင့်အတွက်စားသောက်ဆိုင်အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးပွေးနေဆဲဖြစ်သည်။ 2055 ပြေးလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေးပြီးစီးခဲ့သည်။ စက်မှုစက်ရုံ၏ system ကိုပြင်ဆင်နေသည်။ မကြာခင်မှာပဲသူတို့ကကြိုးမှာရိုက်ကူးမစတင်ပါလိမ့်မယ်။6လူတစ်ထောင်နေ့စဉ်စွမ်းရည် Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် ...
Cibiltepe နှင်းလျှောစီး, နှင်းလျှောစီးရာသီမှပြင်ဆင် 15 / 09 / 2016 Cibiltepe နှင်းလျှောစီး, ပြင်ဆင်နေ၏နှင်းလျှောစီးရာသီ: Cibiltepe နှင်းလျှောစီး Center ကတူရကီ၏အရေးကြီးသောရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားစင်တာများအကြား Kars Sarikamis ၏ခရိုင်ထဲမှာ, နှင်းလျှောစီးရာသီအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။ အဆိုပါနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းGöksal Toksoy အတွက် Sarikamish မြို့တော်ဝန်လေ့လာတွေ့ရှိချက်, သတင်းထောက်တွေကိုကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်သူအလွန်လျှင်မြန်စွာအလုပ်ဆက်လက်ပြောခဲ့သည်။ တဦးတည်းအခြမ်းကနေ Erzurum "Erzincan နှင့် Kars ဆောင်းရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်္" စီမံကိန်း, မိလ္လာစနစ်, စုဆောင်းလိုင်း, စွန့်ပစ်ရေကုသမှုစက်ရုံ, စီးပွားရေးစင်တာ, ဆီးနှင်းဂိမ်းဧရိယာ, Landscaping အလုပ်ပြုသောအမှုသည်, အခြားတစ်ဖက်တွင်ဖော်ပြထားသည် Toksoy "ဟုအဆိုပါနှင်းလျှောစီးလမ်းကြောင်းပြင်ဆင် Sarikamish ၏နှစ်နှစ်အတွင်းပြည်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှစ်ဦးစလုံး ...
Yedikuyu ထွက်သွားတဲ့နှင်းလျှောစီး Center က Path ကိုAsfaltlanıyဖြစ်ပါသည် 16 / 09 / 2019 ဒါဟာအဓိကအားဖြင့် Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Yedikuyu ရပ်ကွက်အတွင်း Bertiz နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေဖို့ access ကိုပေးကတ္တရာသွေးလွှတ်ကြောအတွင်းက၎င်း၏အလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, လမ်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်အလုပ်ဆက်စပ် Yedikuyu ကတ္တရာအလုပ်ဖို့နည်းလမ်းအပေါ်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Filler မှပူးတွဲဦးစီးဌာနသိပ္ပံရေးရာအဖွဲ့ကခဏတစ်များအတွက်ဧရိယာထဲမှာအလုပ်လုပ်နေခဲ့သညျ။ အဆိုပါလမ်းဟောင်းကတ္တရာဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် compacting ၏ပြိုကျကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါပစ္စည်းထို့နောက်လမ်းကြောင်း Array ကိုကတ္တရာများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြသည်နိုင်ပါတယ်။2400 တထောင်မီတာလမ်းကြောင်း Yedikuyu သည့်ကတ္တရာအလုပ်2400 အတွက်နှင်းလျှောစီး Center က Bertiz ရပ်ကွက်အတွင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးတထောင်မီတာသွေးလွှတ်ကြောပြီးစီးခဲ့ရှိရာအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဖြည့်ဆည်းစတင်ခဲ့သည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသိပ္ပံ ...
Palandökenနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းရာသီအဘို့ပြင်ဆင်နေသည် 19 / 11 / 2013 Palandökenနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းရာသီအတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်: Palandökenနှင်းလျှောစီး Center ကလာမယ့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလရာသီအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်ကြက်ဆင်၏အဓိကနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းအကြားတည်ရှိသည်။ ရာသီသစ်သည် Snow White ဟိုတယ်များအတွက်Palandökenတောင်တန်းအတွက် Xanadu Polat Renaissance ထင်းရူးပင်တို့၏အထဲကနောက်ဆုံးနှင့်ညဉ့်နှင်းလျှောစီးအဘို့အ3အသစ်ကနှင်းလျှောစီးတောင်စောင်းလုပ်နေတာ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်.4ယူရိုသန်းကို လုပ်. , Palandökenနှင်းလျှောစီးရာသီ၏ feverish လှုပ်ရှားမှုအတုနှင်းကျစနစ်ဖြင့်ဒီဇင်ဘာလရဲ့ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်ယူသည်။ အဆိုပါ 2011 နှင့်တူရကီခုနှစ်တွင် '' အကောင်းဆုံးအားကစားဟိုတယ် '' Xanadu ဟိုတယ်သည် Snow White နောက်ဆုံး "သူတို့အုပ်ချုပ်ရေးရေးရာ Manager ကအိုမာ Akca များအတွက်ဆုလက်ခံရရှိပြောကြားခဲ့့သည်က ... နှစ်နှစ်ဖွင့်လှစ်
Cibiltepe နှင်းလျှောစီး, နှင်းလျှောစီးရာသီမှပြင်ဆင်
Cibiltepe နှင်းလျှောစီး Center ကရာသီဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်